China ROTARY SCREENING BUCKET fekitari uye bhizimisi | Bonovo
Bonovo Rotary Screening Bucket yakagadzirirwa kuve yakaoma uye kuwedzera kugadzirwa. Iyo Screening Drum inogadzirwa nesimbi yakasimba kutenderera tubular tines Inopa zvirinani kusefa nekugadzirisa zvinhu, ichiita kuti inyatsoita yekugadzirisa maitiro
Bonovo Rotation Screening Bucket basa rinosvina zvirinyore ivhu nemarara, nekutenderera iyo Screening Drum. Izvi zvinoita kuti kusefa kwacho kukurumidze, kuve nyore, uye kunyatsoita basa.
TYPE ZVINOKOSHA GET KUSHANDISA
Kuchenesa Bhaketi Q345B & NM400 \_ Inoshandiswa pakuchenesa basa mugero nematuru.
Skeleton Bucket Q345B & NM400 Adapter, Mazino, Side aricheke /
mudziviriri Inoshandiswa mukubatanidza sieving uye kuchera
yezvinhu zvakasununguka zvakasununguka.
Tilt Huteedzera Bhakiti Q345B & NM400 \_ Inoshandiswa pakuchenesa basa mugero nematuru.
Bhaketi Q345 & Hardox450 Adapter, Mazino, Kurutivi rwekucheka Inoshandiswa mukubatanidza sieving uye kuchera
MAZANO: OEM kana Customizable Kugadzira inowanikwa
Bonovo rotary yekuongorora mabhaketi ndiwo akanyanya akasiyana musika pamusika, yakagadzirirwa kuchinjika kune ese marudzi emuchina. Ivo vakagadzirirwa neanogona kuchinjika modular mapaneru kuti asangane nechero kuongorora zvinodiwa zvebasa.
Yakakwana yekuchengetedza zvikamu pakuvaka nekuvaka nzvimbo dzekuvandudza, kusarudza marara pazvinhu zvekuparadza, uye nekuparadzanisa marara ezvisikwa panzvimbo dzekutakura marara, pamwe nekukanda matangi emidziyo uye kuviga mapaipi mune basa repombi. Iyi hydraulic rotary yekuongorora bhaketi inogona kukwana mambure ekuongorora mambure, ayo anowanikwa mumasikisi akasiyanasiyana, uye zviri nyore kutsiva bhaudhi-pamipendero yekupfeka yekudzikisa pasi nguva uye kuwedzera kugadzirwa.
Xuzhou Bonovo inyanzvi kambani inosanganisa R & D, kugadzira uye kutengesa kwekuvaka michina yekubatanidza. Kubva kumagumo-vashandisi uye vatambi veOEM, kune vatengesi vedu, Bonovo yakavaka mukurumbira wehunhu hunoshamisa uye sevhisi. Isu takavaka kubatana kwakasimba nepasirese - vane mukurumbira vazhinji vepasirese vatengesi vemhando yepamusoro seOEM mukutsigira kugadzirisa uye nekupa masevhisi ekutsigira vagadziri vekunze nekune dzimwe nyika. Zvatinobatanidza kune zvinonyanya kugadzirirwa zvekuchera uye maLader kuti zviwane zvakakwana zvido zvakasiyana muinjiniya michina yekuvaka uye mhinduro yakanakisa inogona kupihwa kumarudzi ese epasi.
Pashure: ROCK RIPPER
Zvadaro: DZAKANAKA-BHUKU BHUKU
12 bhagidhi rechinyoro chidiki
12 inch bhaketi yekubota mini excavator
18 yekuchera bhagidhi
ami chekuchera migomo
kesi 4 mu1 bhaketi rekutengesa
kesi bhaketi rinorongedza
katsi 303.5 bhakiti
compact terekta nebhakiti
excavator stump bucket
chakafukidzwa bhaketi rebucket
gp yekuchera mabhakiti
tirakita yekugadzira pamba
kubota excavator mabhaketi zvakabatanidzwa
micro digger migomo
padding bhaketi rekuchera
dombo dombo rekutsvedza padhuze padhuze neni
skid loader stump bhakiti
thyssenkrupp bhaketi vhiri rekuchera